Adanian Labs Venture ebidola maka mmalite teknụzụ Africa ($120k)
Ihe omume a ghere oghe maka mmalite ndị dabere na teknụzụ dị egwu nwere ihe nlere nke enwere ike ịmalite n'ihu
Adania Labs ewepụtala oku Mmemme Ụlọ Ọrụ Adanian Labs Venture maka mmalite maka 2022.
Ihe omume a na-akpọ ngwa sitere na ndị ọchụnta ego teknụzụ maka otu 2022 nke mmalite pụrụ iche iji sonyere Adanian Labs na Kenya, Tanzania, Zambia, Nigeria na South Africa.
Kemgbe e guzobere ya na 2020, Adanian Labs ewepụtala mmalite teknụzụ iri na anọ (14) n'ofe mpaghara; eguzobela nke mbụ na mmekorita Africa na Emurgo Africa, ụgbọ ala nke EMURGO, ogwe aka azụmahịa nke Cardano ma welite ego mkpụrụ maka 4 nke mmalite ya dị ugbu a. Ụfọdụ n'ime mmalite ndị a ama ama gụnyere:
Afya Rekod – ikpo okwu data ahụike dijitalụ chụpụrụ ndị ahịa
Phema Agri – ikpo okwu igwe mmadu na-eme ihe ubi
Paylend – ngwọta ịgbazinye kredit SME
Ndị ọzọ dị ka Twaa, eCobba , Reward Adz , Bloow na Ada Animation.
Dị ka ụlọ nyocha teknụzụ smart, Adanian Labs nwere ebe abụọ kachasị mma na AI na Blockchain, AICE Africa (AI Center of Excellence Africa) na The Africa Blockchain Center (The ABC) iji nyere aka nweta ebumnuche ya nke ime mgbanwe mgbanwe teknụzụ na Africa.
Mmemme ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ Adanian Labs na-enye ngwakọta nke mmepe teknụzụ, nkwado teknụzụ, ndụmọdụ azụmaahịa, ịnweta ahịa, mmekọrịta na ego mgbe ị na-enyere ndị mbido aka itinye ụkpụrụ dabere na usoro, mmụta, iteration na scaling nke ihe ọhụrụ ha.
Ebumnuche Adanian Lab bụ iwulite mmalite teknụzụ 300 mmetụta na-akpali akpali bụ nke nwere ike ịzụ ahịa ma nwee ike ịgbatị gburugburu kọntinent ahụ na karịa, na-enwe ọhụụ iji mepụta mmetụta dị egwu na akụ na ụba Africa site na ịkwado ndị ntorobịa.
"Anyị bu n'obi wulite ọgbọ na-esote nke ụlọ ọrụ na-emetụta ọha na eze na azụmahịa nke ga-agbanwe ụwa site na Africa.
Anyị bu n'obi ka anyị si akwado ndị ọchụnta ego site n'iwepụ ikike nke ọdịda site na ntinye aka ogo 360 nke na-elekọta isi ihe dị mkpa iji nyere ndị mbido aka ịga nke ọma. " Onye isi oche Adanian Lab, John Kamara kwuru.
Ihe omume a ghere oghe maka mmalite ndị dabere na teknụzụ dị egwu nwere ihe nlere nke enwere ike ịmalite n'ihu. Mmalite dị mma kwesịrị inwe mmetụta dị elu yana ndị ọchụnta ego nwere mmasị na-eduzi ebe a na-agba ndị ntorobịa na ụmụ nwanyị ume itinye akwụkwọ.
"Anyị na-atụ anya ịnweta ngwa sitere na ngalaba dịka FinTech, EduTech, AgriTech, HealthTech, EnviroTech, InsurTech, EnergyTech, Smart-City, MobilityTech, EmmersiveTech gụnyere IOT, Blockchain na AI mmalite.
Anyị kwenyere n'ikike a na-enye ndị ntorobịa Africa ma nwee obi ụtọ isonye n'iwepụta ohere iji nyere ha aka inweta uru bara uru." Kamara kwuru ọzọ.
Adanian Labs na-eji ọnọdụ ya pụrụ iche na-enye nkwado dị oke mkpa maka mmalite site na gburugburu ebe obibi mmekọrịta ọha na eze na-agbanwe agbanwe na-atụgharị na ikesa nke ihe onwunwe, ịmepụta, mmepụta, nkesa, ahia na oriri.
Mmemme nrụpụta a ga-eji ọnwa iri na abụọ wee gụnye mmalite ndị ewepụtara n'ụlọ ọrụ mba Adanian Lab dị iche iche (Kenya, Tanzania, Zambia, Nigeria na South Africa) nwere ego ruru $12 nke ego izizi mkpụrụ.
Ndị mbido tozuru oke nwere ike ịdebanye aha maka mmemme na Labs Adanian website.
Oge ngwụcha maka itinye akwụkwọ bụ Fraịde, Disemba 10, 2021.